Mitsimbina fotoana handaniana dolara | Martech Zone
Alatsinainy Martsa 3, 2008 Talata, Oktobra 4, 2011 Douglas Karr
Omaly alina aho dia nijery ny fiandohana (fa tsy nahatratra ny ambiny) ny fampisehoana Big Oprah's Big Give. Tiako ilay trano - omeo olona $ 2,500 ary ny olona manao ny tsara indrindra amin'ny fanangonana vola be indrindra no mandresy.
Ny ivon'ny seho dia ny tsy maintsy handehananao hihaona amin'ilay olona na olona ampianao. Vokatr'izany, ny fanerena dia tsy natao fotsiny - ny tena tsy famelana ny vahoaka fa teo ianao hanampy.
Ny novakiako ho fanarahana dia ny 2,500 $ tena tsy nisy vokany. Ny $ 2,500 dia natao fotsiny mba hahafahanao manahy momba ny fitaterana, ny antso an-tariby, ny fandaminana sns ... Ny vola tena izy dia tamin'ny faran'ny antso an-tarobia tamina orinasa na olo-malaza iray. Raha tena mifantoka amin'ny toerana sy ny fomba andanianao ny $ 2,500 ianao mba hahafahanao manintona betsaka indrindra amin'izany dia very ianao. Raha tsy jerenao ny $ 2,500 ary mifantoka amin'ny vola be ianao - dia handeha ianao!
Ohatrinona ny dolara?
Ny mifanitsy amiko dia ny fampiasam-bola ataontsika amin'ny asantsika. Raha manana loharanom-bola ianao, dia manahy ny manahy momba ny vola azonao tratrarina amin'ny fividianana fitaovan'ny birao. Ohatra: Noho izany dia manana mpiasa mahazo $ 30 / ora ianao, izay asany dia sarobidy amin'ny $ 70 / ora hikarohana amin'ny Internet hitsitsiana $ 25. Raha nandany adiny an-tserasera niasa adiny iray izy ireo tamin'ny vidin'ny mpanonta vaovao, dia very $ 15 fotsiny ianao. Raha tokony ho izany dia tokony nividy ilay mpanonta voalohany hitanao ianao ary nivarotra ny serivisin'ireto mpiasa ireto tamin'ny $ 70. Mety ho nahazo 15 $ mahery ianao.
Fa maninona? Satria mikorontana amin'ny Internet ny fiezahana hamonjy vola vitsivitsy amin'ny mpanonta printy ary tsy izany no nokaramain'ny mpiasao. Aleon'izy ireo niasa tamin'ny tetikasany, ary ho tsara kokoa noho ianao raha nanao izany. Mety ho nahatratra ny tanjon'izy ireo izy ireo, ara-potoana ary voadio tamin'ny asa-tanany.
Aza miloka mihitsy ny kely indrindra
Rehefa nanambady aho dia nandeha nitsangatsangana tany Las Vegas sy Laughlin niaraka tamin'ny vadiko. Tsy mpiloka aho fa ny ray aman-dreniny no. Ny toro-hevitr'i Neny ahy fotsiny dia ny filokana matetika. Nipetraka nandritra ny fotoana fohy aho nilalao video blackjack sy video poker indray alina ary nanary $ 1.25 tao indray mandeha. Toa tsy dia be loatra izany, fa tao amin'ny tafika an-dranomasina aho tamin'izany fotoana izany ka tsy nanam-bola be. Heveriko fa ny teti-bolan'ny filokana 'dia $ 30 isan'andro.
Rehefa afaka kelikely, rehefa nahita ny fanambanin'ny sanjoko aho dia nanomboka nametraka ampahefatra 4 isaky ny fotoana .. avy eo 3… avy eo 2… avy eo 1… ary nidona tamin'ny Royal Flush aho. Ny rafozambaviko no niarahaba ahy - mandra-pahitany ny fandoavam-bola 62.50 $. Nilatsaka ny valanoranony. Raha nanohy ny $ 1.25 aho, dia tokony ho mpanankarena $ 25,000. Fa kosa, nanana siny quartre hafa fotsiny aho.
Nianarako ny lesona nianarako.
Aparitaho ny filanao
Amin'ny asako ankehitriny, tokony hijery sy hijery ireo mpamatsy vola ao amin'ny orinasa aho ary mpanokatra maso izany. Ny mpamatsy vola anay dia tsy nanary ny kaonty tahiriny sy ny volany tamin'ny fisotroan-dronono niloka taminay. Fa kosa, nanangona vola tamin'ny orinasa 10 izy ireo ary mampifandanja ny sain'izy ireo arak'izany. Tsy nanambola ny fotoanany sy ny volany tamin'ny orinasa iray izy ireo tamin'ny fanantenana sy nivavaka ary nanindry mafy fa hahatratra izany.
Nanaparitaka ny volan'izy ireo tamina orinasa folo izy ireo ary nitady fanampiana tamin'ny orinasa tsirairay tamin'ny fanampiana azy ireo tany amin'izay azony natao. Ny sasany amin'ireo mpamatsy vola antsika dia manome valiny fotsiny toa ny hoe mpanjifa izy ireo. Ny sasany manome ara-bola ary ny sasany manome hevitra ara-teknika. Fantatr'izy ireo ny fomba azo ampiasana ny tanjany ao anatin'ny orinasa tsirairay avy ary zarain'izy ireo arak'izany. Gaga be aho rehefa nilaza taminay izy ireo fa hanapoaka $ 25k eto ary $ 25k any toa tsy misy dikany. Satria izany is na inona na inona.
Tian'izy ireo izahay ny miloka faran'izay betsaka ary mifantoka amin'ny orinasa fa tsy amin'ny kaonty fitehirizana.
Raha lazaina amin'ny teny hafa, tsy miantsena amin'ny mpanonta lafo indrindra izy ireo ary tsy tian'izy ireo ho tonga.
Tags: fanaraha-maso antsomifandrayorinasafitafianalevitra fanapahan-kevitramividy fikarohanafikarohanaRetailersharepointfahazarana fiantsenana
Inona no ao anatiny? Aiza ilay izy? Ahoana? Paikady ara-barotra amin'ny Internet
Mar 3, 2008 ao amin'ny 11: PM PM
Fandroahana mpanjaka ao amin'ny Black Jack, tena ratsy izany!
Amin'ny fomba Doug, nanandrana tsindry ny permalink amin'ity lahatsoratra ity tamin'ny RSS feed aho ary nahazo "Tsy hitanay izany! Na very ianao na isika! ” hafatra. Tsy azoko antoka hoe inona no mitranga, saingy nieritreritra aho fa te hahafantatra ianao.
Oops! Adinoy ny 'sy poker video'. Ny mahatsikaiky dia hoe namely an'i Keno aho halina ary nandoa ny volako. Nanjavona jackpot lehibe hafa aho. Ary teo amin'ny seranam-piaramanidina dia tsy nahita jackpot hafa aho. Somary matevina kely aho indraindray!
Re: Ny RSS - Nisy olana aho tamin'ny fotoana namoahany azy voalohany. Noheveriko fa tsy namoaka izany ary novaiko ilay slug post. Tena mpandresy aho anio hariva! 😉
Mar 4, 2008 amin'ny 9: 30 AM
Doug - Ekeko fa ny fotoana dia vola ary ny fandaniana adiny iray hitadiavana ny vidiny tsara indrindra dia fandaniam-bola. Na izany aza, tsy mino aho fa midika izany fa mividy ilay voalohany hitanao amin'izay vidiny. Raha maharitra dimy minitra aho vao miantso ny BestBuy.com, CircuitCity.com, Amazon.com ary NewEgg.com hahitako izay manana ny vidiny tsara indrindra, dia mendrika ny fotoana ho ahy izany.